SOMALITALK - S/Africa
Waxaa isla mar ahaantaan ku dhaawacway weerarkaas lagu dilay Cabdi Cuur nin kale oo Soomaali ah. Dilkan loo gaystay caawa Cabdi Cuur wuxuu ka danbeeyay dilkii loo gaystay in ka yar uun asbuuc ganacsade kale oo Soomaali ah oo la yidhaahdo Mawliid Sh Yusuf oo 25 Jir ahaa isla gobolkaas.
Sida ay sheegayaan dad goob joog ahaa waxaa dukaanka Cabdi Cuur soo galay niman dabley ah oo rasaas tira badan ku furay dadkii dukaanka ku jiray. Nasiib daro waxayna rasaastaasi cuskatay Cabdi Cuur oo ay ku dheceen todoba xabadood iyo wiil dhalinyara ah oo kale Soomaali ah oo la yidhaahdo Jerry. Cabdi Cuur wuxuu naf baxay intii loo sii waday isbitaalka.
Wadanka K/A wuxuu ka mid yahay wadamada aduunka ugu danbiyada badan waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay kuma ugu dilka iyo dhaca badan marka laga reebo wadamada “ku jira xaaladaha dagaal, sida Soomaaliya ama Congo oo kale”. Waxaa kale oo K/Afrika ay beryahan danbe caan ku soo noqonaysay danbiyada ajnabi nacaybka la xidhiidha.
Sida u diiwaan gashan ururka Jaaliyada Soomalida ee loo yaqaano Somali Association of South Africa (SASA) dilkan Cabdi Cuur wuxuu ka dhigayaa tirada Soomaalida lagu dilay Koonfur Afrika 23 qof tan iyo markii ay Soomaalidu kusoo jabtay Koonfur Afrika sanadkii 1994 tii.. dhamaan dadkani waxay u dhinteen falal la xidhiidha budhcadnimo iyo ajnabi nacayb..
Kuma koobna dilku Soomaalida oo kaliya ee waa dhibaato haysta dalka oo dhan. Tusaale ahaan 9 kii bilood ee u horeysay sanadkii 2001, tirakoob ay booliisku ka qaadeen 1130 booliis istayshin oo ku yaala wadanka K/Afrika oo dhan waxay sheegeen in mudadaas 9ka bilood ah lagu dilay wadanka dad gaadhaya 15 054 qof.
Dilkan loo gaystay Cabdi Cuur wuxuu kusoo hagaagay xilli ay Soomaalidu si qayru caadi ah ugu soo badanayso wadanka Koonfur Afrika, iyadoo lagu qiyaaso inay asbuucii soo galaan ilaa 100 ruux oo Soomaali ahi wadanka. Waxaa kale oo jira Soomaali badan oo ku xidh-xidhan dariiqa u dhexeeya Kenya iyo Koonfur Afrika oo Soomaalidu ay tahriib kusoo marto.
Cabdi Cuur wuxuu ka tagay laba gabdhood iyo wiil iyo hooyadood oo la yidhaahdo Shugri Sheekh. Waxay dhamaantood ku nool yihiin magaalada Port Elizabeth oo Maanta oo Axad ah lagu aasi doono marxuumka.
SomaliTalk April 11, 2004